Madaxwayne Farmaajo Boosaaso Laga Sugayo, soo dhowayntii Carmo (Sawiro) | Kalshaale
Madaxwayne Farmaajo Boosaaso Laga Sugayo, soo dhowayntii Carmo (Sawiro)
Jan 11, 2018 - 20 Aragtiyood
Boosaso (Kalshaale) Madaxweynaha Dowlada Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho ku jooga dowlad goboleedka Puntland xalayna ku hoyday magaalada Qardho ee Gobolka Bari ayaa maanta wuxuu gaari doonaa magaalo Xeebeedka Boosaaso.
Qaban Qaabada lagu soo dhaweynayo Wafdiga Madaxweynaha Soomaaliya ayaa haatan laga dareemaya magaalada Boosaaso iyadoo amaanka magaalada aad loo adkeeyay waxaana wadooyinka waaweyn ee magaalada Boosaaso lagu arkayaa Shacab tirobadan oo isku diyaarinaya Soo dhowaynta Madaxwaynaha.
Madaxwaynaha ayaa goor dhowayd si balaadhan loogu soo dhoweeyay Magaalada Carmo ee Gobolka Bari, Iyadoona Shacabku ay Wadooyinka Waawayn taagnaayeen, Wuxuuna madaxwaynaha Booqday Xarunta Tababarka Booliska Soomaaliya ee Carmo.
HOOS KA DAAWO QAYB KAMID AH SAWIRADA SOO DHOWAYNTA ( CARMO ).
Dadkeenu waa dad hogaan wngsn iyo cadaalad waayey ee dunida shicib naga wanaagsan majiro xoogaa dhaqankii geeljiranimada ayaa jidkii toosnaa nagaweeciyey
Daarood girls well done and good job, farmaajo waad ku faani kartaan oo dhulkiisii iyo dhul kaleba waa haystaa.
Waxaan gabdhaha u sheegayaa in ay dhagax LA dhacaan dhulbagantaha farmajo daba ordaaya we qadada raadinayaa. Please stone them they are not men they are not even women.
Ali xasan baabuurka meeldhexe miyaad kasoo raacday
Sxb, waa runtaa, dadka Somaliyeed waa misaakiin iska jeeljir ah oo wadadii fiican laga leexiyey.
Qayr baan u rajayn meelkasta joogaan Maryoolayda
Somali Maryoolay been been looguma bixin!
Wax ka dhar badan ma arag.
Asc carmo intee ladhaha waligey mamaqal madaxweyne isilaali tuuliyinķa masahlanee
Gabdhuhu DHAGAXDA ay kutaaganyahiin ma isku dheereynhayaan mise waa dhulkii dhamaa.
Somalida dhulkooda ma taqaan, adigana ka mid ayaa tahay.
Puntland wadankii 3 meelood meel waaye!
Puntland wadanka Yemen ka weyn oo 36 million ku nooshahay.
60 degmo ka waran hee!
Hadalkayga been ayaa qoray. Markaan hadda mar labaad aqriyey Yemen.-
Yemen baa dhul ahaan weyn, dadkana waa 29 miliion million.
Land of puntland as sheegi Solana gobal EE bari IYO nugaal mahan mase dhulkalad kahadli?
Bari iyo Nugaal ayuu dal kaaga dhigey sida Yemen oo kalaa.
Alla maxaa Qurbaha lagu qafiifey.
Dabshid sxb sln sare madaxweyne xaaf dhuusameeb imanaa usbuucan maqlay bal warka isii
Sidaan horeyba u sheegey Shaqada ugu horeyso Madaxweyne Farmaajo waa inuu maamulka Galmudug geeyo Caasimadda Dhuusa-mareeb, sidoo kale uu mideeyo Alsubagle iyo Maamulka.
Hadduu ku guuleysto arintaas Shaqadiisii 1/4 wuu Fuliyey waxaa u harey –
– Alsheydaan UGUS
Hadduu ku fashilmo Mideynta GalGaduud iyo Mudug, cid waxkale ka sugeyso maleh, ( wuxuu la midyahey Xassan Shiikh oo ku fashilmey Cagajiidkii iyo Xad gudubkii uu ku sameeyey Xamar NAAS IRMAAN).
Jacayl madaxweynaha u qabaan ayaa qof walba meesha ugu dheer fuulay si u indhihiisa ugu arko.kkkkkkkk
Qaarbaa guryaha kor fuushan.
La isbaray Somalida runta waxay joogaan Puntland.
Galmudug lugooyo Dhuusamareeb iyo Cadaado isku been guurayaan, Somaliland wadankaba in lagu kala tago ayey rabaan,
Xamar iyo koofur madaxa iskula jiraan, maalintii waa wasiir iyo sarkaal amniga suga habeenkiina waa Alshabaab soo dira ciyaal isqarxiya. kkkkkkkkkkkk
Dabshid sxb aan kula kaftamee sacadku ninkarmeed wuu kasoo baxaa lkn isla sacadka ayaan wax u ogolaan xaaf waa nin arintaas og wuxuu ogaaday howshan ceyr inuu wadi karo waa niman wax isu ogol aan iskadaba jiitamin marka xaaf inuu ceyr ugadhuunto ayuu rabaa maamulka
Farmaajo udhilkiisi ayuu jooga adna ibadi meyside naga dhaaf ciyaarta waar dadki maseyr puntland ayakuwada dhacay illahoow caafi gah gah gah gah carmo mataqanid bal tuulo aad leedahay nosoo qor gah gah gah gah gah gah
Rer puntland qofkii dhul ugafanayow hslkaa kusoo qor anaga dhulkena calamkii ayaa dawanaya gah gah gah gah gah
Kamaal waxan arkay madaxweynaha cabaar ku lugeyay banaan qorax lamadegaan hoos geed laheen kk kk saxarahas madhuk IGA dhigeysaan yaahuuuu
Puntland markan kamaseyra anoo hiiraan badark iyo galeydii lagaturay baarka cambahii bisladay barwaaqo kunool dhalan maiheeso boowe see weeye